Supervisor Archives - Glory Assumption Space
Supervisor – Male/ (6)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Trading Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ Supervisor – Male/ (6)Posts /လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် / မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။ -တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ -စက်သုံးဆီဆိုင်နှင့် ပတ်သက် သည့် အတွေ့အကြုံ ရှိရမည် ။ -ကွန်ပျူတာအခြေခံတတ်ကျွမ်းရမည် ။
Supervisor - Male (5) Posts
Supervisor – Male (5) Posts/ လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ကျပ်/ ရန်ကင်းမြို့နယ်။
AGTI Civil / တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် Training ဆင်းနိုင်ရမည်။
English4Skills ကျွမ်းကျင်ရမည်။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လမ်းမတော်မြို့ နယ်ရှိ Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 4.Supervisor/Assistant Supervisor – Male (5) Posts/လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ကျပ်(အထက်)/လမ်းမတော်မြို့ နယ်။ •	BE(Mechanical),BE(Chemical),B.Sc(Chemistry),IC ဘွဲ့ ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ •	အသက် ၃၀ နှစ်အောက်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။ •	Brewing/Packaging အတွေ့ အကြုံ ၂နှစ်အထက်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။ •	Oversea Training နှင့် Contract ချုပ်နိုင်ရမည်။ •	နေစားစရိတ်ငြိမ်းနှင့်အဆောင်စီစဉ်ပေးမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Supervisor - Male / Female (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ Advertising Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1	Supervisor – Male / Female (5) Posts / လစာ -၂၀၀,၀၀၀ - ၂၅၀,၀၀၀ကျပ် / တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။ •	တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်။ •	ကွန်ပျူတာ (Excel,Word,PowerPoint,Internet/Email) ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး သွက်လက်ဖျတ်လတ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ အင်းစိန်လမ်းမကြီး )
Supervisor –Male (5) Posts/ Salary-250,000 Kyats
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Technology Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ 1.Supervisor –Male (5) Posts/ Salary-250,000 Kyats / Mayangone Township - အသက် ၂၅ မှ ၃၅ နှစ်အထိ ရှိသူ ၊ ကျန်းမာ သန်စွမ်းသူ ဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ - ကား Polish တိုက်ခြင်းနှင့် ကားရေဆေးလုပ်ငန်းတွင် Supervisor ရာထူး အတွေ့အကြုံ (၂ ) နှစ်နှင့် အထက် ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - အသောက်အစား ကင်းသူဖြစ်ရမည်။ - လူအများအား ကောင်းမွန်စွာ စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ - နေ့လည်စာ ထမင်းကျွေး ပါသည်။ - အစမ်းခန့် ကာလ ၂လ အတွင်း ကျွမ်းကျင်လျှင် 280,000 ကျပ် တိုးပေးမည်။ အမှတ်စဉ်အားလုံးအတွက်လုပ်ငန်းအပေါ်တွင်ရိုးသားကြိုးစားစွာလုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူ၊ ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.-09- 263119775, 09-262223785, 09-977397705, 09-263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ –Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Supervisor- Male (5) Posts
1. Supervisor - Male (5) posts / Salary – 300,000 Kyats / Sanchaung Township . - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - English (4) Skills ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - Foreigner များနှင့် Communication လုပ်နိုင်ရမည်။ - Paperwork များကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ရမည်။
Supervisor - Female (5)Posts
GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော သင်္ဃန်းကျွန်းတွင်ရှိသော Foreign ကုမ္ပဏီကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည်။ 1.	Supervisor (စားသောက်ကုန် )- Female (5)Posts/Salary -200000 Kyats++++/Thingangyun Township -	Any Graduate (or) IC/Chemistry/Food Technology နှင့်ပတ်သက်သော ဘွဲ့ရဖြစ်လျှင်လစာကောင်းကောင်းပေးမည်။ -	ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်ပြေပြစ်ရမည်။ -	English စကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောနိုင်ရမည်။ -	Malaysia မှာ Training ပေးမည်။ -	အရပ် ၅ ပေအထက်ရှိရမည်။ -	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်သည်။ -	Bond ထိုးရမည်။ -	၃ လပြည့်ပြီးလျှင် Commission ခံစားခွင့်ရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com
Supervisor - M/F (5)Posts
GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော သင်္ဃန်းကျွန်းတွင်ရှိသော Foreign ကုမ္ပဏီကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည်။ 1.	Supervisor - M/F (5)Posts /Salary – 200000 Kyats++++/Thingangyun Township -	ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ -	ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်ပြေပြစ်ရမည်။ -	English စကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောနိုင်ရမည်။ -	Malaysia မှာ Training ပေးမည်။ -	အရပ် ၅ ပေအထက်ရှိရမည်။ -	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်သည်။ -	Bond ထိုးရမည်။ -	၃ လပြည့်ပြီးလျှင် Commission ခံစားခွင့်ရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101. ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။